इटहरीकी ज्ञानको भण्डार प्रा.डा.गिता अधिकारी इटहरीको जनता क्याम्पसमा हाई हाई
महिला भएर केही गर्न सकिँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ र यो त यथार्थमा पनि हैन । महिला हुनासाथ उसले केही गर्न सक्दैनन् भन्नु त्यो मानिसको मूर्खता हो ।हो यस्तै महिलाहरू मध्येको एक उदाहरण हुन् प्रा. डा. गीता अधिकारी । अहिले प्रा. डा. गीता अधिकारी इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसको निमित्त क्याम्पस प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्। गीता अधिकारीको जन्म वि।स २०२५ सालमा पिता अधिवक्ता प्रेम प्रसाद अधिकारी र माता सिता अधिकारीको कोखबाट सेती अञ्चलको डोटी जिल्लामा भएको थियो । सरकारी जागिरे पिता डोटीमा कार्यरत भएको बेला गीताको जन्म भएको थियो । ६ महिनाकी उनलाई आमा बुवाले धरान लिएर आए जहाँ उनको बाल्यकाल सामान्य तरीकाले नै बित्यो ।
अधिकारीले ६ कक्षा सम्मको अध्ययन धरानमै पुरा गरिन्। बाल्यकालमा उनको खास त्यस्तो कुनै फरक पाटो थिएन । बुवा शिक्षित भएकाले अध्ययन गरी योग्य नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा उनलाई परिवारबाटै मिल्यो । पढ्न नमान्दा जोगीको डर देखाएर पिताले पढ्न लगाएको घटना अधिकारी आज पनि झल्झली सम्झन्छिन् ।
२०३६ सालमा उनको परिवार सुन्दर हरैँचामा बसाईं सरेपश्चात् उनले त्यहीँ कक्षा ७ मा नाम लेखाएर अध्ययन सुचारु गरिन् । नयाँ ठाउँ र परिवेशमा नयाँ साथीहरूसँग घुलमिल हुन उनलाई एक वर्ष जति लाग्यो।
साथीहरू सँग घुलमिल भैसके पछि उनीहरूको अत्यन्तै मिल्ने साथीहरूको पाँच जनाको समूह बन्यो। त्यो समूहले मिलेरै पढाई गरेको र मिलेरै फटाई पनि गरेको उनी सम्झन्छिन् । उनीहरू आफूले खाएको चटपटेको कागज, बरफ खाएको डण्ठी आदि केटा साथीहरूको ब्याग भित्र हालिदिएर केटाहरूलाई दिक्क बनाउँथे रे।
साजिलाल माविमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनकी एउटी साथीको लभ पर्दा साथीलाई इटहरी सम्म छोडेर आफू गएर पढेको कुरा बिर्सन नसक्ने क्षणको रूपमा सम्झिन्छिन्। त्यस बेला पत्रिकामा पत्र मित्रता गर्ने चलन थियो। कसैले उनका साथीहरू अङ्गुरा र भावनाको नाम र ठेगाना कसैले पठाइदिएछन्। एक्कासी उनीहरूलाई स्कुलमा चिठी आउँदा सबैजना आश्चर्य चकीत भएछन्।
यस्तै उटपट्याङ गर्दै, रमाउँदै, पढ्दै र सिक्दै, प्रवेशिका परीक्षा आयो । उच्च शिक्षाको ढोका मानिने प्रवेशिका परीक्षा दोस्रो डिभिजनमा उत्तीर्ण गरेपश्चात् परिवारले विज्ञान विषय पढ्न आग्रह गरे पनि उनी धरान गएर मानविकी सङ्कायमा भर्ना भई अध्ययन सुरु गरिन । व्यवहारिक कारणले धरानमा अध्ययन अघि बढ्न नसकेपछि उनी काठमाडौँ गएर महेन्द्र रत्न कलेजमा होस्टेल बसेर अध्ययन गर्न थलिन । बाध्यता भन्दा रहरले उनले साथीसंगीको लहैलहैमा लागेर निजी विद्यालयमा पढाउन थालिन्। ज्ञानको भोक कहिल्यै नमेटिएको बताउने गिताले मानविकी संकायबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तह सक्दा नसक्दै कानुन विषयमा समेत आइएल उत्तीर्ण गरिसकेकी थिइन ।उनको बुबाको अदालतमा थुप्रै कामहरू भइरहने र सहयोगी कोही नभएका कारणले उनलाई २०४४ सालमा धरान बोलाए । धरान आएपछि महेन्द्र कलेजमा बिए तहको अध्ययन गर्न थालिन् ।
पढाईमा रस भएका कारण विश्वविद्यालय तहको सबै शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेकी गीताको बिए दोस्रो वर्ष अध्ययन गर्ने क्रममा विवाहको कुरा चल्न थाल्यो । परिवारले रोजेकै केटा सँग बिबाह गर्न उनी तत्पर भइन्। तर गीताको एउटा सर्त थियो , विवाह पछि पनि पढ्न पाउनु पर्छ ।
केटा पनि शिक्षित परिवारकै थिए, यो प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गरे । अधिकारीको विमल पौडेल सँग विवाह भयो ।
अब उनी छोरी बाट बुहारी भइन् । ठुलो परिवार भएकाले गर्दा अधिकारीलाई त्यो परिवार र समाजमा घुलमिलहुनकेही समय लाग्यो । त्यही बिचमा उनले बि।ए दोस्रो वर्षको परीक्षा थियो, एक विषयमा असफलता भोग्नु पर्योा । पछि परिवेश अनुसार घुलमिल हुँदै जाँदा उनले सफलता हासिल गरेरै छाडिन् ।
२०४९ सालमा उनको परिवार धरानबाट इटहरी बसाई सरे । यतिबेला उनले बि।ए तहको अध्ययन पूरा गरिसकेकी थिइन् । अब उनी आफ्नो पढाईलाई अझ अगाडी बढाउने सोचमा पुगिन् । घरका सबै परिवारले अझै पढ्नु पर्छ भनेर हौसला दिने गरेको अधिकारी बताउँछिन् ।
परिवारको त्यही हौसलाले आत्मविश्वास बढाउँदै उनी एक वर्षको बालक छोरालाई इटहरीमा छोडेर विराटनगर डेरामा बसेर राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न थालिन् जसमाउनी सफल पनि भइन् । सफल हुँदै गएपछि उनको हौसला र आत्मविश्वास अझ बढ्दै गयो र उनले थप ३ वटा विषय राजनीतीशास्त्र, समाज शास्त्र र शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह सम्मको अध्ययन पूरा गरिन् ।
यसै सिलसिलामा उनी २०५६ सालमा इटहरीको जनता कलेजमा अध्यापन गराउन थालिन् । अध्यापन गराउन जाँदा बिहान ४ बजे उठेर नित्य कर्म सकेर पूजा पाठ गरेर चिया बनाएर, सासूलाई खुवाइवरी उनी क्याम्पस जाने गर्थिन्।कलेजमा उनले निकै मेहनत गरी कैयन विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिइन् । कुनै पनि पदमा नरहँदा पनि क्याम्पसको विभिन्न जिम्मेवारीहरू लिने र त्यसमा इमानदारीताका साथ काम गर्ने गरेकी थिइन् ।
जनता बहुमुखी क्याम्पसमा २० वर्ष अध्यापन गराई सके पछि उनको लगाव, इमानदारिता र योग्यता देखेर उनलाई सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो ।
३ वटा विषयमा स्नातकोत्तर गरिसकेकी अधिकारीलाई विद्यावारिधि गर्ने हुटहुटी ताजै थियो त्यही हुटहुटी बोकेर अरू ४ जना साथीहरूसँगै अधिकारी भारतको विवेकानन्द विश्वविद्यालयमा गइन् । त्यहाँ अध्यययन सुरु गरेको ५ वर्षमा उनले विद्यावारिधि हासिल गरेरै छोडिन्। उनको शोधको विषय ‘विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको भूमिका (व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा)’ Role of Head Teachers in the management of education (In reference to information management system ) भन्ने थियो।
छोरीको प्रगतिमा सधैं खुशी हुने उनका बुवाले आफ्नो जीवनमा छोरीले अध्ययन पूरा गरी डाक्टर भएको समाचार सुन्न सम्म पाए। उनको विद्यावारिधि सम्पन्न भएको समाचारले बुवा औधि खुशी भएका थिए। काठमाडौंमा बस्ने बुबालाई आफूले पढेर विद्यावारिधि गरेपछि भेट्न भने उनको भाग्यले दिएन। कोरोनाका कारण लकडाउन भैरहेकै बेला गत बैशाखमा उनका बुवाको निधन भयो । “आफ्नो सफलता सुनाएर बुबाको मुहारको खुसी हेर्ने मन थियो तर त्यो भन्दा पहिलेनै बुवाको देहान्त भयो” उनी गुनासो गर्छिन् ।
अधिकारी इटहरी नगरबाट विद्यावारिधि गर्ने दोस्रो महिला हुन्। घर र माइती परिवारमा भने दुवैतिर पहिलो।
विद्यावारिधि गरेर पनि उनमा कुनै घमण्ड छैन । सिङ्गो जीवन सिकाई भएकाले अझै आफूले धेरै ज्ञान हासिल गर्न बाँकी रहेको अधिकारीको ठम्याई छ ।
आफ्ना गुरु प्राध्यापक डा। टङ्क न्यौपाने जस्ता हस्तीको अगाडी आफूले क,ख पनि नजानेको अधिकारी बताउँछिन् । अहिले पनि उनी हप्ताको ३ घण्टा कक्षा लिंदै छिन् अनुसन्धान लेखनको। उनी विभिन्न विषयहरूमा खोज अनुसन्धान गर्दै छिन् । उनले पुरुष हिंसाका बारेमा पनि खोज अनुसन्धान सुरु गरी सकेकी छन् । महिला भएर महिलाकै विषयमा मात्र खोज्नु र लेख्नु पर्छ भन्ने छैन पुरुष पनि हिंसामा परेका हुनाले पुरुषका बारेमा पनि खोजिनु पर्छ भन्ने उनको बुझाई छ ।
अधिकारी अध्ययनको क्षेत्रमा मात्र होइन सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । उनको सामाजिक क्षेत्रको सक्रियता पनि निकै लोभलाग्दो छ । उनी सन् २००५ को इटहरी लेडिज जेसिजको अध्यक्ष भएर आफ्नो जुझारु नेतृत्वमा निकै नतिजामूलक कामहरू गरिन । लायन्स क्लब अफ क्रियटिभ लेडिजको २०१७/०१८ को संस्थापक अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरिसकेकी उनले रेडक्रसको अजिवन सदस्य भएर निरन्तर सामाजिक भूमिकामा समेत सक्रिय छिन ।
शैक्षिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा अन्य सबै सफलताको शिखर चुम्दै गएकी अधिकारी निकट केही दिनमै इटहरीकै पुरानो र प्रतिष्ठित जनता बहुमुखी क्याम्पसको पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्दै छिन् ।